I-Europe iye e-Asia: IBahrain ine-Hub Logistics Hub esheshayo
Ikhaya » Izindaba Zamuva » Chofoza lapha uma lokhu kungukukhishwa kwakho kwabezindaba! » I-Europe iye e-Asia: IBahrain ine-Hub Logistics Hub esheshayo
Izindaba zeBahrain Breaking • Chofoza lapha uma lokhu kungukukhishwa kwakho kwabezindaba!
UMbuso waseBahrain wethule indawo eshesha kunazo zonke yokusetshenziswa kwamalungiselelo amaningi esifundeni ene-2hr kuphela isikhathi sokuguqula zonke iziqukathi - imikhiqizo esho ukuthi ingaba namakhasimende phakathi nesikhathi futhi ngo-40% wezindleko.
Ukwethulwa kwe- "Bahrain Global Sea-Air Hub" kwenza kokubili isikhundla se-Bahrain phakathi kwezimakethe zase-Europe nase-Asia kanye nokusondela ezimakethe ezihlosiwe zesifunda ngokusungula indawo esebenza kahle kakhulu yokuhambisa umoya olwandle esifundeni nge ukufinyelela komhlaba wonke.
Ihabhu lithembele ezinqubweni zokuhlanza ezihlanjululwe, ukwenziwa kwempahla okwenziwe kahle, kanye nokwenza kwidijithali okugcwele ukufeza isikhathi sokuhola kuze kube sekugcineni esingaphansi kwamahora amabili izimpahla ezisuka eBahrain International Airport ziye eKhalifa bin Salman Port, futhi okuphambene nalokho.
Lezi zinzuzo zihumushela ekwehliseni ngo-50% isilinganiso sesikhathi sokuhola uma kuqhathaniswa nempahla yasolwandle emsulwa kanye nokwehliswa kwezindleko ezingama-40% uma kuqhathaniswa nemithwalo yomoya emsulwa. Ngokunjalo, ihabhu lomoya wasolwandle laseBahrain lisebenza njengenye indlela ebalulekile kubakhiqizi nabadlulisela phambili imithwalo, ikakhulukazi esimweni senkinga eqhubekayo yokuthunyelwa kwemikhumbi.
IBahrain izonikeza isikhundla sozakwethu kulesi sinyathelo kuzo zonke izimakethe zomhlaba jikelele ezizovumela ukunikezwa kwezinkampani zabo ezizinze ezweni lonke ithuba lokuba ngumgibeli othembekile ogunyaziwe esikhungweni se-Bahrain's Global sea-to-air logistics hub.
UNgqongqoshe Wezokuthutha Nokuxhumana Ngocingo eBahrain, u-Kamal bin Ahmed uthe:
“Ukwethulwa kwalesi sikhungo se-Global Sea-to-Air logistics, esisheshayo eMpumalanga Ephakathi, lapha eBahrain kuyithuba langempela hhayi ezinkampanini zomhlaba wonke kuphela kodwa nakubathengisi bezimpahla emhlabeni wonke. Le nsizakalo ingaholela ekongweni kwezindleko ezingama-40% uma kuqhathaniswa nemithwalo yomoya kuphela kanye nezikhathi zokuhola ezisheshayo ezingama-50% kunempahla yasolwandle emsulwa. ”
Wengeze wathi: "Lokhu singakwenza kuphela ngenxa yesikhundla sethu esiyingqayizivele, ukusondela kwamachweba ethu, kanye nabalawuli bethu, opharetha kanye neziphathimandla zamachweba abasebenza ngokubambisana kanye nesisombululo sethu sobuchwepheshe besimanje."
Lesi sikhungo sizokwenza ukukhula komkhakha wezokulungiswa kweBahrain ozosiza ekuqhubekeni nokwandisa umnotho woMbuso. Ukukhula konyaka kwe-Bahrain okungewona uwoyela unyaka nonyaka kufinyelele ku-7.8% ku-Q2 ngo-2021.
Izindleko zokusebenza emkhakheni we-logistics ziphansi ngama-45% eBahrain uma kuqhathaniswa nezimakethe ezingomakhelwane, njengombiko we-KPMG 2019 "Izindleko Zokwenza Ibhizinisi kuLogistics". Lokhu kubeke iBahrain njengendawo ekhangayo yamabhizinisi omhlaba nawesifunda asebenza kulo mkhakha.
Mayelana noMnyango Wezokuthutha Nezokuxhumana Ngocingo (MTT)
UMnyango Wezokuthutha Nezokuxhumana (i-MTT) waseBahrain ngumgwamanda kahulumeni obhekele ukuthuthukiswa kanye nokulawulwa kwengqalasizinda nezinhlelo zezokuThutha zoMbuso.
Ngenhloso enkulu yokwenza ngcono izinga lempilo nokwenza lula ukuhamba kwabantu nezimpahla ngomhlaba, ulwandle, kanye nokuthuthwa komoya ngokuhambisana ne-Economic Vision 2030, i-MTT inikwe umsebenzi wokuthuthukisa izimboni zezokuthutha ezihambisanayo nezisimeme ukusekela izimbuso zoMbuso. ukukhula komnotho.